China Nyowani Yekuvandudza Inotakurika Magetsi Kofi Grinder vagadziri uye vanotengesa | Trimill
Customized Stainless Steel Glass Bottle Munyu Pepper ...
Professional Mugadziri For Vakasiyana Sizes Of Cer ...
The Classic Stainless simbi chinjika Manual kofi ...
Nyowani Simudzira Inotakurika Magetsi Kofi Grinder
Kukosha Kwemunyu Uye Mhiripiri mukuyi
Manual Spice Munyu Pepper Mill Neakasiyana mwaka
Classic bhatiri yemagetsi munyu uye mhiripiri chigayo ESP-1
Mugadziri Pepper Mukuyi Kafi Ekukuya Ceramic G ...
2021 Runako dhizaini yemagetsi munyu uye pepper grinder yakaiswa
Mumusika wekubikira dzimba weUS nemutengo wemusika wemabhiriyoni gumi nemana, vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana vanoshandisa pre-ground kofi hupfu. Vanhu vazhinji vane mibvunzo. Nei uchifanira kutenga zvinokuya kofi kana iwe uchikwanisa kutenga poda yekofi zvakananga? Kana iwe ukaitika kuti une kofi grinder pamba, zvinoenderana nehuwandu, ingangove iri blade yemhando yekofi grinder. Mhedzisiro yeiyi grinder ingori nani zvishoma pane iya yekupwanya bhegi renhofi yekofi.
Nei chigayo chakakosha kudaro?
Pane zvikonzero zviviri: kutsva uye kutora.
Kunyangwe iyo poda yekofi yaunotenga yakachengetwa ne nitrogen, iyo nguva yaunovhura chisimbiso, inotanga kuve oxidized. Iyo kofi inogayiwa uye yakakamurwa kuita makapu. Mushure mekumirira kwehafu yeawa, gaya imwe kofi nyowani yekuenzanisa. Musiyano uripo pakati pevaviri uchakushamisa iwe: Mushure memaminetsi makumi matatu chete, hwema hwekapu yekutanga yekofi hwanyanya kunyangarika.
Iko kusanganiswa kwekunhuhwirira uye kuravira ndiyo yakazara kofi kuravira. Ichi ndicho chikonzero chikafu chinopera kana iwe uchirwara. Kunhuwirira kwepoda yekofi yepasi-pasi kucharasika, kushaya "hutano".
Kunyangwe iwe uchida zvakadzika kana zvinyoro zvakakangwa bhinzi kofi, kana kushandisa kumanikidza kana kudonhedza kusefa, kuisa mari mune yakanaka Burr set grinder ndiyo nzira iri nyore yekuvandudza mhando yekofi yako.
"Trimill" kofi yekukuya iri kuuya!
Yakanaka inobatwa ruoko yemagetsi kofi yekugaya inogona kuzadzisa zvaunoda zvezuva nezuva zvekofi, chengetedza nguva uye nesimba, uye inogona zvakare kubvisa kofi yemarudzi akasiyana. Panguva imwecheteyo, inotakurika. Iwe unogona kugadzira kapu yekofi iwe pachako kana uchifamba kana parwendo rwebhizinesi. Chinhu chikuru cheiyo yakanaka yekugaya kofi ndeye kukwana uye kufanana kwekukuya. Kambani yedu yakagadzira ruoko nyowani-inobatwa yemagetsi kofi yekugaya. Iyo inoshandisa ichangobva kugadzirwa ceramic kukuya musimboti neiyo inonzwisisika chimiro uye inogona kukuya zvakanaka kwazvo uye zvakaenzana. Iyo poda "yakatanhamara" pakati pevamwe vanogaya kofi. Yedu yekukuya kofi yapasa bvunzo dzakawanda, uye mhando yechigadzirwa inogona kuvimbiswa.
Iyo yakanaka kiyi grinder, iwe unofanirwa nayo!
Pashure: Kukosha Kwemunyu Uye Mhiripiri mukuyi
Zvadaro: Iyo yeClassic Stainless Simbi Inogadziriswa Manual Kofi Grinder
Otomatiki Burr Kafi yekukuya
Burr Nereza Kofi Grinder
Ceramic Kofi Grinder Ruoko
Magetsi Ceramic Burr Kofi Grinder
Kukuya Kofi Mill
Ruoko Mill Kofi Grinder
The Classic Stainless simbi chinjika Manual C ...